Haseen Dillruba (2021) – MM Subtitles
ရီရှတ်ဘ် ဆက်ဇီနာ( ရီရှုး) ဟာ သူ့အိမ်တွင်းမှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ ရဲတွေစုံစမ်းချက်အရ ပေါက်ကွဲမှုဟာ မတော်တဆမှုမဟုတ်ပဲလူသတ်မှုသာဖြစ်နေခဲ့ပြီး အဓိကသံသယတရားခံကတော့ ရီရှူးရဲ့ ဇနီး ရာနီးဖြစ်ပါတယ်။
ရီရှူးဟာအနေအေးသလို အပေါင်းအသင်းလဲနည်းတဲ့တည်ငြိမ်တဲ့အလုပ်အကိုင်နဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဇနီးသည်ရာနီးကို မိဘတွေစပ်ဟပ်ပေးရာက ညားခဲ့ကြတာပါ။ ရာနီးကတော့ သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်စရိုက်ပိုင်ရှင် တစ်ဦးပါ။အိမ်မှုကိစ္စမနိုင်နင်း၊ အပြောအဆိုအနေအထိုင်ပွင့်လင်းရဲတင်းပြီး ရီရှူးမိခင်နဲ့လဲသိပ်အဆင်မပြေပါဘူး။
ရီရှူးဟာ မိဘတွေကြောင့်တွေ့ဆုံခဲ့ရပေမယ့် တစ်ကြိမ်တွေ့မိရုံနဲ့အစွဲကြီးစွဲလန်းခဲ့ပြီးလက်ထပ်ယူခဲ့ရတဲ့ ဇနီးချောလေးရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုမျက်ကွယ်ပြုထားပြီး အစစအရာရာခွင့်လွှတ်ထားတဲ့ကြားက သည်းခံနိုင်စွမ်းတွေ တစ်စထက်တစ်စကုန်ခန်းလာနေတဲ့အချိန်၊ အဲ့ဒီလိုအချိန်မှာမှ ရီရှူးရဲ့ ညီဝမ်းကွဲ မိန်းမတွေကျလောက်တဲ့ ရုပ်ရည်မျိုး နဲ့ အပြောအဆိုလဲညက် သွက်သွက်လက်လက် လူငယ်ဆန်ဆန် နီးလ်ဆိုတဲ့ တတိယလူတစ်ယောက် သူတို့ဇာတ်လမ်းထဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ဇာတ်လမ်းအစကပြောခဲ့တဲ့ အခြေအနေတွေ ဆိုက်ရောက်တဲ့အထိ သူတို့ဘဝတွေ မုန်တိုင်းထန်ရတော့တာပါပဲ။
သူ့ခင်ပွန်းကို ရာနီးတကယ်ပဲလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခဲ့သလား? ရာနီးနဲ့ နီးလ်ဟာ တကယ်ပဲဖောက်ပြန်တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ကြသလား? လူသတ်တရားခံဟာ နီးလ်ကောဖြစ်မနေနိုင်ဘူးလား?
Haseen Dillruba ဟာပေါ့ပေါ့ပါးပါး အပန်းဖြေကြည့်ရှုရမယ့် Crime,Thriller ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ မှုခင်းနောက်ခံဆိုပေမယ့် Dark ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုမသွားပဲနဲ့ သဘာဝကျကျဟာသလေးတွေ၊ နောက်ခံတေးဂီတ မြူးကြွတဲ့ တင်ဆက်ပုံတွေနဲ့ငြီးငွေ့စရာမရှိအောင် ဆွဲဆောင်ခေါ်ယူသွားနိုင်ပါတယ်။
Plot Holes တစ်ချို့ရှိနေပေမယ့်လဲ သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ ကျရာနေရာပီပြင်လွန်းမှုတွေကနေ ပြန်ဖာထေးသွားတဲ့အတွက် ဇာတ်လမ်းထဲမှာမျောပါရင်းပြစ်ချက်တွေကိုမေ့သွားပါလိမ့်မယ်။
Taapsee Pannu ခေါင်းဆောင်တဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့အလျောက်မင်းသားတွေက ဇာတ်ပို့နေရာကပဲရပါတယ်။ ဒီကြားထဲက ရတဲ့နေရာကို အမိအရ ဆုပ်ကိုင်လက်စွမ်းပြသွားနိုင်တဲ့ ရီရှုူး (Vikrant Massey)ကတော့အထူးချီးကျူးစရာပါပဲ။ နီးလ်အဖြစ်တော့ Sanam teri kasam ထဲကအကြည့်တွေစူးရှရှနဲ့မိန်းကလေးတွေအသည်းစွဲခဲ့တဲ့ Harshvardhan Rane တို့ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားပါတယ်။
IMDb Rating 6.9 13,283 votes
Download 🔥 1080p 5.1CH ⚡Fast Drive 1.48 GB
Download 720p ⚡Fast Drive 572 MB
Download 720p ⚡Fast Drive 572 MB/''
Download 480p ⚡Fast Drive 358 MB
Download 🔥 1080p 5.1CH G Drive 1.48 GB
Download 720p G Drive 572 MB
Download 480p G Drive 358 MB
Download 🔥 1080p 5.1CH Solid Drive 1.48 GB
Download 720p Solid Drive 572 MB
Download 480p Solid Drive 358 MB